Dogecoin Wallets: Ahoana ny fametrahana ireo Wallet ofisialy amin'ny GNU / Linux? | Avy amin'ny Linux
Androany, hiditra indray amin'ny tontolon'ny rindrambaiko (fampiharana) maimaimpoana sy malalaka (rindrambaiko malalaka) eo amin'ny sehatry ny Cryptocurrencies sy DeFi. Hodinihintsika manokana Inona ireo ary ahoana ny fametrahana ny Walleco Dogecoin ofisialy amin'ny GNU / Linux?
Amin'ny fomba toy izany, raha afaka manamafy indray isika ary manohy tena ilaina tokoa, hampiseho Rafitra miasa malalaka sy malalaka, indrindra ireo mifototra amin'ny GNU / Linux, izy ireo dia tsara amin'ny fitrandrahana / hitahiry ireo tsy mitovy Fananana Crypto misy, toy ny Bitcoin, Dogecoin, ankoatry ny maro hafa.
MinerGate: Ahoana ny fametrahana an'ity rindrambaiko mpitrandraka amin'ny GNU / Linux ity?
Ary mba hamenoana ny lohahevitra hodinihina ary alohan'ny hidiranao ao anatiny feno, toy ny mahazatra, dia hatolotray izany amin'ny faran'ny famakiana ity publication ityRaha mahaliana manokana an'io sehatra io ny lohahevitra dia vakio ity manaraka ity Lahatsoratra mifandraika tena hanampy be izany.
Hatramin'izay, ao amin'izy ireo no hahitan'izy ireo fampahalalana maro mifandraika amin'izany amin'ny:
Inona avy ireo rafitra sy rafi-pandidiana ary azo ampiasaina mora foana amin'ny fitrandrahana nomerika?
Ahoana ny fanatsarana / fampifanarahana ny Distros GNU / Linux hitrandrahana / hitahiry Cryptoassets samihafa?
Ny fitaovana tsara indrindra amin'ny fitrandrahana cryptocurrency
1 Wallecoin Wallet: poketra ofisialy
1.1 Inona ireo ary ahoana ny fametrahana ny Dogecoin Wallets ao amin'ny GNU / Linux?
1.1.1 Inona ny Dogecoin?
1.1.2 Wallecoin Wallet: MultiDoge sy Dogecoin Core
1.2 Mianara bebe kokoa momba ny Cryptocurrencies sy DeFi
Wallecoin Wallet: poketra ofisialy
Inona ireo ary ahoana ny fametrahana ny Dogecoin Wallets ao amin'ny GNU / Linux?
Alohan'ny hitenenana Inona avy ireo ary ahoana ny fametrahana azy ireo?, tsara ny manazava izany, noho ny karazany maro karazana Rafitra miasa GNU / Linux, azo antoka fa mila mametraka sy / na manangona ny sasany ianao fonosana / tranomboky ilaina mialoha.
Amin'ny tranga azo ampiharina, ny fametrahana ny "Dogecoin Wallets" Amin'ny a Respin (sary) anarana voatondro Fahagagana GNU / Linux izay miorina amin'ny MX Linux ary naorina manaraka ny «Torolàlana Snapshot MX Linux» ary manatsara ny Fitrandrahana nomerika amin'ny fananana Crypto, manaraka ny tolo-kevitra marobe, ireo tafiditra ao amin'ny publication dia nantsoina «Avadiho ho lasa Operating System mety ho an'ny Digital Mining ny GNU / Linux anao».
Inona ny Dogecoin?
Araka ny hevitry ny Tranonkala ofisialy Toy izany koa no ilazana azy toy izao:
"Loharano misokatra, vola dizitaly avy amin'ny peer-to-peer mamela anao handefa vola amin'ny Internet. Hevero ho "vola Internet" i Dogecoin.".
Wallecoin Wallet: MultiDoge sy Dogecoin Core
Indray mandeha ao amin'ny Tranokala ofisialin'ny Dogecoin, izao fotsiny no ataontsika:
Tsindrio ny kisary Linux eto ambanin'ilay hafatra manao hoe: "MOMBA NY MOMBA NY DOGECOIN ANIO"
Avy eo misintona iray na roa "Dogecoin Wallets" o Wallet / Purses hapetraka sy hampiasa.
Manaraka, ary amin'ny tranga MultiDoge, raha vao sintonina ary novonoina ny ".Jar fisie" ankehitriny (multidoge-0.1.7-linux.jar) mampiasa Java na OpenJDK, ny pikantsary etsy ambany dia mampiseho ireto dingana manaraka ireto:
Manaraka, ary amin'ny tranga Dogecoin Core, raha vao nisintona ary namaha ny zotra ny "Rakitra .Tar.gz" ankehitriny (dogecoin-1.14.2-x86_64-linux-gnu.tar.gz) mila mihazakazaka fotsiny, amin'ny alàlan'ny terminal (console) ny "File Dogecoin-qt" , amin'ny zotra:
Araka ny asehon'ireo pikantsary dia ireto manaraka ireto:
Mianara bebe kokoa momba ny Cryptocurrencies sy DeFi
Eny, rehefa avy namaky ity boky ity te hanohy hianatra bebe kokoa ianao ambonin'ity sehatra teknolojika malalaka sy misokatra ity dia mamporisika anao izahay hijery ireo zavatra vita an-tsoratra hafa ireo:
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Dogecoin Wallets» manamboninahitra, izany hoe, eo ho eo Inona ireo ary ahoana ny fametrahana ny Dogecoin Wallets ao amin'ny GNU / Linux?, dia tena ilaina ho an'ireo izay mampiasa ny Operating Systems malalaka sy misokatra hitrandrahana / hitahiry ny tsy itovizany Fananana Crypto, ahoana Dogecoin ary ny hafa, ary izany koa dia mahaliana sy mahasoa indrindra ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Dogecoin Wallets: Ahoana ny fametrahana ireo Wallet ofisialy amin'ny GNU / Linux?
GOS-P4: Mikaroka ny loharano malalaka misokatra sy mitombo an'ny Google - Fizarana 4